Magaalo laga guuray oo khilaaf cusub ka dhex dhalisay Madaxweynaha Turkiga, Mareykanka & Midowga Yurub - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Magaalo laga guuray oo khilaaf cusub ka dhex dhalisay Madaxweynaha Turkiga, Mareykanka & Midowga Yurub - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Magaalo laga guuray oo khilaaf cusub ka dhex dhalisay Madaxweynaha Turkiga, Mareykanka & Midowga Yurub
Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa qaatay mowqif culus oo uu ka qaatay xal laba-dal ah oo laga hirgeliyo jasiirada kala qeybsan ee Qubrus.
Erdogan ayaa taageeray qorshe dib loogu dhisayo magaalo ay ka guureen dadka reer Qubrus ee Giriigga kasoo jeeda. Waxayna arrintan keenay inay si weynu cambaareeyeen madaxda Mareykanka iyo dalalka Midowga Yurub.
Khudbad uu Erdogan ka jeediyey waqooyiga magaalada kala qeybsan ee Nicosia ayaa ku adkeysatay qorshaha uu ku doonayo dib u furista magaalada cidlada noqotay ee Varosha. Waaan magaalada laga dhigayaa magaalo nolol cusub la geliyo oo loo dalxiis tago.
Isagoo ka hadlayey munaasabad lagu xusayey 47 guuradii qabsashada Turkey ee jasiiraddan kala qeybsan, ayaa Erdogan wuxuu weeraray isku dayada guul-darreystay ee Q/Midoobay ku mideyneyso labada Qubrus, isaga oo yiri “Ma hayno 50 sano oo kale oo aan khasaarino.”
Jasiiradda ayaa u kala qeybsan Jamhuuriyadda Qubrus oo ay maamulaan dad Giriig ah, iyo Jamhuuriyadda Turkish-ka ee Waqooyiga Qubrus, oo ay aqoonsan tahay kaliya Ankara.
Dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale cambaareysay qorshaha Madaxweyne Erdogan, wuxuuna Xoghayaha Arrimaha Dibadda Antony Blinken uu bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallabaadaas “ay si cad u waafaqsaneyn” Qaraarada Golaha Ammaanka Q/M.idoobay
Previous articleAkhriso: Shuruudaha Musharixiinta Aqalka Sare ee Baarlamanka (Qodobka Lacagta aan dib loo celineyn)
Next articleJen. Biixi: “Saadaq Joon Ciidanka Federaalka kama tirsana, balse waa shakhsi dagaalka ku jira…”